ဘယ်လိုမွေးမြူရေးငါးခူ - ငါးခူစစ်မှန်သောစိုက်ပျိုးရေး• Yuri BSF
ဘယ်လိုမွေးမြူရေးငါးခူ - ငါးခူစစ်မှန်သောစိုက်ပျိုးရေး
Yuri | ဒီဇင်ဘာ 26, 2018 | ဘယ်လိုစိုက်ပျိုးရေးငါးခူမှ
SHARE ၌ဤ (ဖြန့်ဝေ)
ထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကို WA, FB, G +, Pinterest, LinkedIn တို့တွစ်တာကဲ့သို့သောလူမှုမီဒီယာမှ
လောက် forage Solutions
သင့်ရဲ့အကြောင်းအရာကဒီမှာတတ်၏။ Edit သို့မဟုတ်ဖယ်ရှားပစ်ဒီစာသားကို inline ဒါမှမဟုတ် module တစ်ခုအကြောင်းအရာ setting တွင်။ သင်က module ကိုဒီဇိုင်းအပြင်အဆင်များ၌ဤအကြောင်းအရာကိုလည်းစတိုင်တိုင်းရှုထောင့်နိုင်နှင့်ပင် module ကိုအဆင့်မြင့်အပြင်အဆင်များ၌ဤစာသားကိုမှထုံးစံ CSS ကိုသက်ဆိုင်ပါသည်။
က aeration မပါဘဲဖြစ်နိုင်သလား?
ငါးခူသားဖေါက်ဘို့ aeration မပါဘဲရေကန်ဖြစ်နိုင်သည်, ဒါပေမယ့်အန္တရာယ်ကြောင့်ကြီးထွားလည်းမရှိ ဖလောင်းကောင် နှေးကွေးသောငါးခူ။
ကျနော်တို့ကရေကန်ထဲမှာအစိုင်အခဲစိုက်ပျိုးမှုငါးခူပမာဏကိုတိုးမြှင့်နိုင်အောင်ကယင်းသားဖေါက်ရေကန်ထဲမှာ aeration ၏ရည်ရွယ်ချက်ရေကန်ထဲမှာအောက်ဆီဂျင်ပမာဏကိုတိုးပွားလာနေသည်နားလည်သဘောပေါက်ရပါမည်။
ရေကန်ငါးခူလောင်းအထက်တစ်အောက်ခံပေးခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်ပါတယ်။ နေရောင်လူကန်းသည်ရေကူးကန်သို့တိုက်ရိုက်သွားပါအတိုင်းဤ Alas ။ ရေညှိ၏တိုးတက်မှုလျှော့ချနိုင်ဒါ။
အနက်ရောင် Wares တစ်ကျုံးနှင့်အတူရေညှိသန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ။
ထို့အပြင် PK သို့မဟုတ် metalin Blu, အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်တစ်ပါတ်ဆားရှိပါတယ်ပေးထားရပါမည်။ ဝေမျှလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များအနည်းငယ်အရေးကြီးသောပြဌာန်းချက်ဖြစ်ကြသည်။
စတုရန်းမီတာလျှင်စံပြ Stock သိပ်သည်းဆ?
စတုရန်းမီတာလျှင် Stock သိပ်သည်းဆများအတွက် LxWxH ရေကူးကန်ပွားခြင်းဖြင့်တွက်ချက်နိုင်ပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့်ပျမ်းမျှအားဖြင့်ရေ 280 အတူငါးခူအမြိုးအနှယျအရွယ်ရေကူးကန် 300cm 25cm x ကိုအမြင့်က x 10cm - 15cm နှင့်ရေပျံ့နှံ့နေတဲ့နှင့်တကွ, ရေကူးကန်အရွယ်အစားဖြစ် 50.0002အမျိုးအနွယ်အားတက်လိုက်လျောညီထွေနိုင်သည် -3။
500 အမြီး - ကနဦးလေ့လာသင်ယူမှုများအတွက် 1.000 အကြားနိုင်ပါတယ်။
အဘယ်အရာကိုအသက်အရွယ်ငါးခူအမျိုးအနွယ်ကိုအမှုန့်တောင့်သို့မဟုတ် Fengli ပေးအပ်ခြင်းခံရသင့်သလဲ
တစ်ပိုးတီကောင်ရယူအတွက်အခက်အခဲများအတွက်ပရိုတိန်းထောက်ပံ့ရေးနှင့်အတူအစားထိုးနိုင်ပါတယ်အဖြစ်သို့သော်ကပိုးပိုးကောင်များပေးထား fixed ရပါမည် ခေါက်ဆွဲလောက်.
ကုန်ကြမ်းလောက်လောက်ထဲကနေကိုဖန်ဆင်းခေါက်ဆွဲသို့မဟုတ် ဖလောင်းကောင် ဒါမှမဟုတ်လောင်း blackflies သို့မဟုတ် အနက်ရောင်စစ်သားယင်ကောင်.
အဲဒီလောက်လောက်၏ပုံစံအတွက်အဓိကကုန်ကြမ်းထို့နောက်တစ်ဦး Blender အခြားပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်အတူရောနှောဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါအာဟာရ content တွေကိုအကျယ်ချဲ့နိုင်ပါတယ်တိုးမြှင့်ဖို့ကစော်ဖောက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် 24 alamai နာရီများအတွက်ရေခဲသေတ္တာအတွင်းပထမဆုံးစတိုးဆိုင်ကိုသုံးစွဲဖို့မတိုင်မီက။
အဆိုပါလောင်း feed ကိုငါးခူဖို့ဘယ်နှစ်ယောက်ဂရမ်အမှုန့်သို့မဟုတ်လုံးလေးများ Fengli ၏ပေးထားသလဲ?
Pengli အမှုန့်တောင့်အတော်လေးခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်တဦးတည်းဂရမ်ပေးထားသော။ ဘယ်လိုရေကန်မှတိုက်ရိုက်ဆုကြေးဇူးကိုငါးခူလောင်းစုဆောငျးနိုင်ပါတယ်။
feed ပထမဦးဆုံး "dibibis" အစောပိုင်းမွတ်မပြေနိုင်သောငါးမျှားအပြင်နိုင်အောင်, ငါးဗိုက်အပြင်ပမှာချဲ့ထွင်လုပ်ကျွေးနိုင်ရန်အတွက်ကြောင့်ရည်ရွယ်ချက်ကိုလည်းရောဂါဖောင်းပွမှကာကွယ်နေကြပါတယ်သငျ့သညျ။
အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းကိုဘယ်လို membibis နေသောခေါင်းစဉ်:
15 မိနစ်ထိမိသည့်အခါအစာကျွေးဖို့ spongy သို့မဟုတ်ပျော့ခံစားရ - 30 ကျော်လေတိုက်နှုန်းအတွက်ပြီးသား Bibis အတွက် feed ကိုကြပါစို့။
ကောငျးအလှနျခံရဖို့ထို့ပြင်လောင်း feed ကိုငါးခူအဆင်သင့်။
လောင်းကျွေးမွေးငါးခူတက် Give သည်လောင်းကြည့်၏ဝိညာဉ်ကိုတဖန်စားရန်စတင်မပေးလျှင်ရပ်တန့်။
အဆိုပါလောင်း feed ကိုမစားဘဲနေကြသူအများအပြားရှိပါတယ်သေချာအောင်လုပ်ပါ။ အများကြီးအနည်အနှစ်များအမိုးနီးယားသို့မဟုတ်ငါးခူမျိုးစေ့မှအဆိပ်အတောက်ဖြစ်လတံ့သောရေကန်၏အောက်ခြေမသွားပါစေပါနဲ့။
အများဆုံးရလဒ်များကိုအဘို့, ပိုးပိုးကောင်များ၏အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်ခြေလှမ်း-by-step လိုက်နာရမည်:
ထို့အပြင်ရှေ့တော်၌, တကယ်စင်ကြယ်သောရေကို kocor လမ်းနှင့်အတူလက်ဆေးပေးစား။
ရေအရည်အသွေးကိုကျဆင်းစေသောရေကန်၏အောက်ခြေမ buildup အသေကောင်ကို casut နှင့်ပိုးပိုးကောင်များလည်းမရှိသေချာအောင်လုပ်ပါ။
အကယ်. မိုးရွာတာရှည်အလုံအလောက်နို့တိုက်ကျွေးရေး၏ပြင်းထန်မှုတစ်နေ့လျှင်နှစ်ကြိမ်, ကနို့တိုက်ကျွေးရေးအချိန်တွင်အစာကျွေးပေးဖြစ်ပြီး, ငါးခူအားဖြင့်ပိုကောင်းစုပ်ယူ။
ယူ casut ပြီးနောက်ကောင်းသောအဘယ်အရာကိုတစ်ဦးအစာကျွေးခြင်း,
အစေ့ Hardy ငါးတစ်ဦးပရီမီယံ psc ပေးထားနိုင်ပါတယ်ပြီးတာနဲ့။ သို့မဟုတ်ပေးသောအစာကျွေးခြင်း၏ကုန်ကျစရိတ်အပေါ်ကယ်ဖို့ လုံးလေးများလောက် မြင့်မားသောပရိုတိန်း။
လုံးလေးများလောက်အခကြေးငွေဖြစ်စေခြင်းငှါ, ပရိုတိန်းတစ်ခုပြီးပြည့်စုံသောအစာအာဟာရနှင့်မြင့်မားသောပါဝင်တဲ့အပြင်သာ 3.000 / ကီလိုဂရမ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးလည်းအလွန်နည်းသည်။
လောက် BSF, မျော့, ခရုစသည်တို့ကို
ဖလောင်းကောင်သူ့ကိုယ်သူလုပ်ကာလွယ်ကူပြီးစျေးသိပ်မကြီးတဲ့လမ်းများအတွက်သူ၏လမ်း google မှာပွင့်လင်း, www.YurieBSF.com
အဆိုပါငါးခူအမြိုးအနှယျအရွယ်အစား 1 အမိန့်ကိုဘယ်လို -2အဖြူနှုတျသီးရောဂါရှောင်ရှား?
ဒီပြဿနာတွေကိုရှောင်ရှားရန်, ရေကူးကန်အထက်မိုးခံခဲ့ရသည်, သို့မဟုတ်ပါကလည်းတစ်ဦးအမိုးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့ငှက်ပျောရွက်ပေးနိုင်ဘူး။
အဘယ်ကြောင့် cranium ငါးခူတစ်ဖုရှိသလော
ဤပြဿနာကိုကျော်လွှားဖို့ရေကိုအစားထိုးလုပ်ပေးနှင့် probiotics ထည့်ပါ။
ပုံမှန်သင်္ဘောသီးအရွက်အပေါ်ပေးထားနိုင်ကာကွယ်တားဆီးရေးအဘို့အ Probiotics ။
သို့မဟုတ် noni ရွက်ဖျော်ရည် probiotics ကိုအသုံးပြုပါ။
ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်း metalin, ထို့နောက်သုံးနာရီအကြာတွင် 50% အဖြစ်တာအဖြစ်ရေလဲလှယ်ဆေးပေး Blu ။
အဆင့်နှစ်, လာမယ့်နို့တိုက်ကျွေးရေးလျှော့ချနှင့် dibibis မတိုင်မီငါးမှရသောအခွင့်ရှိသေချာပါစေ။
အဆိုပါ tile ကိုမှတဆင့်ကျဆင်းမိုးရွာတိုက်ရိုက်အဆိပ်အတောက် tile ကိုကနေအနက်ရောင်အနာကြောင့်, ရေကူးကန်ထဲသို့ကျပါဘူးသေချာအောင်လုပ်ပါ။
ကောင်းဂျင်း add ဘဲနေရသနည်း
အလွန်ကောင်းတဲ့, ထိုကဲ့သို့သောဂျင်းသို့မဟုတ်ဂျင်းသို့မဟုတ်ကြက်သွန်ဖြူသို့မဟုတ်ကွမ်းရွက်အဖြစ်နံ့သာမျိုးကို add ကိုအလွန်လုံငါးတိုးမြှင့်ကူညီပြုတ်ရသည်။
သဘာဝဟင်းသီးဟင်းရွက်ကိုလည်းသဘာဝ probiotic အဖြစ်ကောင်းပါတယ်။
Geprak 3-5 ကြက်သွန်ဖြူလေးညှင်းပွင့နှင့်ငါးခူရေကန်သို့ဖြန်း
ဘယ်နှစ်ရက်အမျိုးအနွယ်ကိုငါးခူ hatching ပြီးနောက်ခွဲထားခဲ့သည်?
15 ရက်အကြာမှာပထမဆုံးမျိုး Perform ။
သို့သော်အတော်လေး bendolan ခေါ်ဆောင်သွားသို့မဟုတ်သာ plentongan ဖြစ်ပါတယ်။
15 ကာလ၏နှစ်အောက်မျိုးစုစုပေါင်းမဟုတ်ငါးပါသလား, ကငါးသတ်အံ့သောငှါအန္တရာယ်များရှိနိုင်ပါသည်။
အဆိုပါရေအဆင့်ကို 20cm ထက်မပိုသင့်ပါတယ်။
ကြောင်းဖြစ်ပျက်သငျ့သညျလျှင်, မှန်မှန် probiotics နဲ့ကုသမှုလုပ်ပါ။
ဘယ်လိုအမျိုးအနွယ်ကိုငါးခူ 3-4 အရွယ်အစားအသေခံရန်လွယ်ကူသည်မဟုတ်သနည်း?
အမိုးမပါဘဲရေကူးကန်၏ပြည်နယ် အကယ်. နှင့်ရေကူးကန်တနေ့လုံးနေရောင်နှင့်ထိတွေ့စေ, ဒါ 30 အဖြစ်ရေပြောင်းလဲမှုများကိုလုပ်ဆောင် - 50% ။
max ကိုကြီးထွား? ပျိုးပင်စောင့်ရှောက်ဖို့ဘယ်လို
ဒါပေမယ့်စတိုးဆိုင်တွင်ဤစံနှုန်းများနှင့်အတူအစာကျွေးမဝယ်လျှင်, ကုန်ကျစရိတ် nutut လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ဒါကြောင့်နိမ့်ဆုံးဖြစ်နိုင်သမျှကုန်ကျစရိတ်မှာလိုအပ်မည့်လောက် feed ကိုငါးခူအဖြစ်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အခြားနည်းလမ်းလုပ်သင့်ပါတယ်။
အရက်လေးဆယ်ပတ်လုံးဖို့လှည့်ကွက်သည့်အခါလောင်းဘဝတွင်ရှိသောပိုးငါးအထိလောက်ကုန်တယ်တစ်ခုသို့မဟုတ် Blender နှင့်ငါးခူလောင်းအားပေးပြီးမှ။
အဆိုပါခေါက်ဆွဲကပ်နှင့်လောက်အခြေချပါဘူးအစာကျွေးနိုင်ရန်အတွက် kakaban ရုတ်သိမ်းပေးရန်။
ရေကိုအစားထိုးရေအခြေအနေများအပေါ် အခြေခံ. ရပါမည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုဒေသရေရဲ့အရည်အသွေးအဆင့်ဆင့်ကွဲပြားသောကြောင့်။
ရေကန်ရေ Abau ပုပ်ထုတ်ပေးစတင်နေပြီသည့်အခါရေဝိသေသလက္ခဏာများဖြစ်ပါသည်အစားထိုးရမည်ဖြစ်သည်။
ရေကိုအစားထိုးမရတကြိမ်, ဒါပေမယ့်ငါးအလျင်အမြန်ရွှေ့ဖို့ပြန်ကြည့်တိုင်အောင်၏ထက်ဝက်ဦးရေအများဆုံး, ပြီးတော့ထပ်လာမယ့်နေ့က။
ကြီးထွားလာငါးခူ kuntet နှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်မှဘယ်လိုနေသလဲ?
ယေဘုယျအားဖြင့်ဖြစ်သောကြောင့်လည်းကြံဖန်ဆင်းရဲသောသူနှင့်အစာကျွေးပေးထားအရည်အသွေးကို၏အရည်အသွေးအစာကျွေး၏ပုံစံထဲကအတော်များများအကြောင်းတရားများတိုးတက်မှုနှုန်း kuntet ငါးခူ။
အများအပြားဒေသများရှိ feed ကိုကုန်ကျစရိတ်၏ကြီးမားသောပြဿနာ။
တစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာအစာကျွေးခြင်းလောက်ဖန်တီးဖို့ဘယ်လိုအသေးစိတ်ဝက်ဘ်ဆိုက် Yuri BSF မှာကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ပါသည်။
google type ကို Yuri bsf သို့မဟုတ် type ကို www.yuriebsf.com အတွက်
ထိုကဲ့သို့သောခြင်လောင်းအခြားတိရစ္ဆာန်ရုံရေမျောနှငျ့ငါးအရပ်ရပ်သို့ကွဲပြားငါးများအတွက်သောက်သုံးရေအဖြစ်အပိုဆောင်း feed ကိုကိုယ်နှိုက်အဖြစ်ထက်အခြားအဖြစ်အသေးစားတိရိစ္ဆာန်များ။
အဲဒီမှာရေမရှိသောရေတွင်းသည်နှင့်မီးပူနှင့်၎င်း၏အနုတ်လက္ခဏာမှုန်ကွန်တိန်နာ၏အောက်ဆုံးမှအခြေချနိုင်ဖို့အတွက်သုံးရက်ထို့နောက်သင်သည်သင့်သည်အနည်းဆုံးပထမဦးဆုံး endapkan ရေ Pam မှရရှိသောရေကိုအသုံးပြုချင်ပါ။
နောက်တစ်နေ့ခြေလှမ်းဓာတ်မြေသြဇာဝင်ဗုံတစ်အိတ်နှင့်အတူ fertilization သည်နှင့်တစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ပတ်ရပ်ကြကုန်အံ့။
ပေးခြင်း probiotics လည်းကောင်းသောဖြစ်ကြပြီးထိုလုပ်ငန်းစဉ်ရေရေကန်အစိမ်းရောင်အရှိန်အဟုန်မြှင့်ကူညီပေးသည်။
ဒီဖြစ်ပျက်ခဲ့လျှင်, ကွဲပြားခြားနားသောရေကန်ထဲသို့ငါးခွဲထုတ်သို့မဟုတ်ခွဲဝေခြင်းဖြင့် thinning ကြဘူး။
အဘယ်ကြောင့်ကြက်ဥအများအပြားရလဒ်များကို spawning ပေမယ့်များစွာသောအသေရှိပါသလဲ
သေလွန်သောသူတို့သည်အရေအတွက်လျော့နည်းပြင်ဆင်ထားဖြစ်ကြောင်း sires ၏အရည်အသွေးကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ထို့ကြောင့်လုံး sires ငါးခူလုံးဝအဆင်သင့်ဖြစ်သင့်သေချာပါစေ။
အဆိုပါငါးခူ broodstock စောင့်ရှောက်မှု pijahkan အတွက်မတိုင်မီပရိုတိန်းနှင့်အပြည့်အဝ nutrsi နှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုမြင့်မားကြောင်း feed ကိုပေးထားရမည်ဖြစ်သည်သေချာအောင်လုပ်ပါ
ထိုကဲ့သို့သောလောက် BSF အဖြစ်မြင့်မားတဲ့အာဟာရအစားအသောက်ကိုပေး။
Dibibis feed ကိုမရောက်မီပေးထားသောနှင့်သဘာဝ probiotic လောင်းအဖြစ်သေးငယ်တဲ့အပိုငျးပိုငျးသေးငယ်တဲ့လမ်းတွေနဲ့ဂျင်းသို့မဟုတ်သင်္ဘောသီးအရွက်ပေးပါ။
99 တည်နေရာ Ranch အခြားလောက်စစ်ဆေး!
အဘယ်သူမျှမ related ရေးသားချက်များ!
ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှု BSF လောက်မီဒီယာ Bekatul
မွေးမြူရေးလမ်းလောက်မကြာမီက BSF 2019
ဘယ်လိုအချဉ်ပေါက်ဖွဲ / ဖွဲဆန်ငါးခူ Feed ရန်
အဆိုပါငါး Feed ရန်ရေနံအုန်းကိတ်မုန့်၏အသုံးချ
ငါးခူစိုက်ပျိုးရေး Sangkuriang လမ်း 2019